टक्सार संरक्षणमा जुट्दै स्थानीय- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
टक्सार संरक्षणमा जुट्दै स्थानीय
श्रावण २४, २०७८ कुम्भराज राई
ओखलढुंगा — दुई सय वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको सिद्धिचरण नगरपालिका ७ मा पर्ने बिगु टक्सारको संरक्षणमा स्थानीय जुटेका छन् । भोजपुरको टक्सारसँग समकालीन मानिने बिगु टक्सारको संरक्षणमा स्थानीय जुटेका हुन् ।
टक अर्थात् पैसा काट्ने ठाउँका रूपमा चर्चित बिगु टक्सार हालसम्म ओझेलमा परेको थियो । बिगु टक्सारमा टक काटिएको हालसम्म कुनै प्रमाण थिएन । हाल स्थानीय अग्रसर भई प्रमाणको खोजीकार्य सुरु गरेका छन् ।
तत्कालीन टक्सार रहेको स्थानमा उत्खनन गर्दा टक काटेको ढुंगा, तामाको धातुबाट निस्किएको किट भेटिएको छ । त्यसैगरी स्थानीयसँग तामाको टक, डोली पैसासमेत भेटिएको छ ।
टक काटेको भनिएको स्थाननजिकैको खोला किनारमा ठूलो परिमाणमा तामाको किट फालिएको ठाउँ छ । ‘जिजुको पालामा राणाहरूको सेना यहाँ बस्थ्यो भन्ने सुनको हो,’ स्थानीय कालबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘ती सेनाहरूले स्थानीयलाई निकै दुःख दिन्थे रे भन्ने सानोमा सुन्थ्यौँ । तर के कारणले सेना बसेका थिए भनेर खोजिएन । अहिले आएर थाहा भयो ती त पैसा काट्ने ठाउँको सुरक्षार्थ खटाइएको थिएछ ।’
ओखलढुंगाको जन्तरखानी र सोलुखुम्बुको विभिन्न ठाउँमा तत्कालीन अवस्थामा तामाखानी सञ्चालनमा थिए । त्यतिखेर सञ्चालन भएको तामाखानीहरू अझै छन् । त्यही खानीहरूबाट निकालिएको तामालाई टक काट्न टक्सार स्थापना गरिएको अनुमान गरिन्छ । टक्सारलाई ऐतिहासिक स्थलको रूपमा विकास गर्ने योजना सुरु गरिएको छ ।
‘जहाँ गए पनि ठेगाना सुनाउँदा बिगु टक्सार भन्नेबित्तिकै तिमीहरूकोमा पैसा काट्ने गर्थ्यो ? भन्ने प्रश्न सबैले गर्छन् ।’ स्थानीय साङ्गे शेर्पाले भने, ‘तर हामीसँग कुनै प्रमाण नभएपछि यस वर्षदेखि यसको प्रमाण खोजौँ र संरक्षणको काम गरौं भनेर टक्सार भएको ठाउँमा उत्खनन गरी केही पूर्वाधार बनाउने तयारी सुरु गरेका छौँ ।’
सिनपा–७ बिगुटारका वडाअध्यक्ष बमबहादुर राईले टक्सार भएको स्थानको जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको बताए । उक्त जग्गालाई टक्सार संरक्षण समिति नामक संस्था गठन गरी संस्थाको नाममा जग्गा ल्याउने र स्मारक बनाउने योजना रहेको बताए ।
‘इतिहासलाई संरक्षण गर्न स्मारक बनाउने योजना छ,’ वडाअध्यक्ष राईले भने, ‘त्यो सँगै त्यसका लागि आवश्यक प्रमाणहरूको खोजी गरेर संरक्षण गर्ने छलफल भइरहेको छ ।’
भोजपुर टक्सारको इतिहासअनुसार विसं १८७२ मा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहको पालामा टक्सार स्थापना भएको थियो । बिगु टक्सार सोही समयकालकै मानिन्छ । बिगु टक्सारमा अझै नेवार र विश्वकर्मा समुदाय रहेकाले टक काट्नका लागि उनीहरूलाई ल्याइएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ ०८:३४
दुग्ध किसानलाई १५ करोड अनुदान
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानलाई सवा १५ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रमअन्तर्गत १५ करोड १५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको हो ।
प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ सय ७९ वटा सहकारीमा आबद्ध भएका ४ हजार ५ सय किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिलिटर एक रुपैयाँका दरले ८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।
अघिल्लो वर्षकै अनुदान रकमका आधारमा सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार दुग्ध सहकारीहरूले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी अनुदान माग गरेका थिए । अनुदान पाउन किसानले सहकारीमार्फत नै दूध बेच्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी सम्बन्धित दुग्ध सहकारी संस्थाले दैनिक कम्तीमा ३ सय लिटर दूध संकलन गरेको हुनुपर्छ । वार्षिक कम्तीमा २ सय दिन दूधको कारोबार गरेको पनि हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा दूध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अनुदान रकम वितरण गरिएको हो । निर्देशनालयले प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका २ सय ५० वटा सहकारीले अनुदान माग गरेका थिए । यसमध्ये प्रक्रिया पूरा गरी आएका १ सय ७९ वटा सहकारीलाई छनोट गरी त्यसमा आबद्ध किसानलाई अनुदान दिइएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रामप्रकाश प्रधानले जानकारी दिए । ‘हामीले किसानलाई सहकारीमार्फत अनुदान उपलब्ध गराएका हौं,’ उनले भने । उनले प्रदेशले दिने अनुदानलाई अझ पारदर्शी र किसानकै हातमा पुर्‍याउने उद्देश्यले चालु वर्षदेखि प्रत्येक किसानकै खातामा रकम पठाउने गरी नीति तय गरिएको बताए । यसअन्तर्गत सहकारीले किसानको अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाएका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ ०८:३२